Hery Rajaonarimampianina : “Ilaina fotoana ny fampandrosoana Ekonomika” -
AccueilSongandinaHery Rajaonarimampianina : “Ilaina fotoana ny fampandrosoana Ekonomika”
Hery Rajaonarimampianina : “Ilaina fotoana ny fampandrosoana Ekonomika”
“Tsy misy ny fampandrosoana tonga ho azy, raha tsy misy ny asa tanterahina. Amin’ ny maha filoham-pirenena ahy dia maro ireo tetik’asa sy fotodrafitrasa vita, ary programa sosialy notanterahina ahafahan’ny Malagasy miaina. Izany hoe tanjona ny fampandrosoana maharitra ” hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina nandritra ny fandaharana fotoam-bita. Fomba fanaon’ireo mpanao politika hatrizay tokoa ny fampanantenana poakaty, miaro fisehoana ivelany. “Hampidinin-tsika avo folo eny ny vidin’ny menaka sy ny entana fampiasana andavanandro, rehefa tonga eo amin’ ny toerana aho ” hoy i Andry Rajoelina ny taona 2009. “Hahazo fiara 4L tsirairay ny fianakaviana raha toa ka izao no lany eo”, hoy indray Marc Ravalomanana. Niarahan’ny rehetra nahita anefa ny tsy fahatanterahan’izany, na iray aza.
Nampatsiahy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, fa ny asa fampandrosoana dia tsy ho vita anatina fotoana fohy. Ilalaovan’ireo mpanao politika ny vahoaka ny fifidianana hoy ny filoha, ary tsy izay ihany fa eo koa ny filazana fa tsy nahavita azy ny fitondram-panjakana sy ny governemanta Rajaonarimampianina. Ambetin-tenin’ ireo mpanao politika ny miresaka fahantrana, tsy fandriam-pahalemana, fidangan’ny vidim-piainana, ary ny hoe vahana anatin’ ny fotoana fohy ny fahasahiranana. Izany anefa dia resaka fotsiny hambaboana ny mpifidy, satria ny mpanao politika tsy mpanao fahagagana. Fandemena ny sain’ ny Malagasy tsy hino ny fampandrosoana ho avy, amin’ ny alalan’ ny fihomanana amin’ ireo fotodrafitrasa efa natsangana, ny fampiasana ireo teny ireo hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Fantatr’ireo mpanao politika tsianjery ny fahantran’ny Malagasy, ary izay no hanambazan’izy ireo ny mpandatsa-bato, amin’ ny alalan’ ny vary iray “sachet’’ sy mofo ary fitafy. Ireo rehetra voalaza ireo anefa dia fitaka avokoa, satria vary iray ‘’sachet’’ dia lany anatin’ ny roa andro, ny akanjo sy ny lambahoany dia ho potika anatin’ny taona iray. Noho izany, tsy tokony ho sodoka amin’ ny endrika ivelany intsony ny mpifidy, fa tokony hijery ny finiavana sy ny fahavononana efa hita maso. Raiso ary hano ny vary, hitafio ny akanjo satria fanomezana, fa kosa ny tanana mandatsa-bato dia ataovy ho an’ny fampandrosoana maharitra an’i Madagasikara.
Tsy mazava intsony mihitsy ny lalaon’ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim). Tsy vitan’ny manao fitetezam-paritra amin’izay fampahafantarana ho kandida amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny filoha nasionaliny, Marc Ravalomanana, fa manao ny ataony ...Tohiny